Ukutya, iiklasi zezemidlalo, ukusilalisa kunye nezinye iinzame zokunciphisa umzimba asizuzi mpu melelo? Jonga ubugcisa bendabuko obudala obuya kuvula iingcango zendlu yakho kwimo yenguqu kwaye ubeke umzimba ukuba unciphise ubunzima. Kwenzeka ngokukhawuleza njani ukulahlekelwa isisindo ngaphandle kwesidlo kunye nokuzivocavoca umzimba - siya kuqhuba.
Ingcamango ebalulekileyo ye-feng shui kukuhamba kwe-qi amandla. Ijikeleza yonke into ekhoyo, igcwalisa umzimba ngamandla kunye namandla. Nguwo lo mandla ojongene nokusebenza kweenkqubo ezijikelezayo, ezinobuhlungu kunye ne-lymphatic. Ukuba impilo ayivuyayo kwaye i-metabolism iyancipha, ngoko i-qi yindawo ethile. Kodwa musa ukwenza i-drafts ye-chi: ukuhamba kokukhawuleza kwamandla kuchitha, kungabi nexesha lokwenza utshintsho oluhle ebomini. Ngoko ke, umsebenzi owona mkhulu kaFeng Shui kukudala izimo zokuhamba kunye nokuhamba rhoqo kwe-qi.
Iprotuberance, iipendeni ezibukhali zefenitshala kunye neeshefu ezithintekayo ziphazamisa ukuhamba kwe-flow flow. Naka ingqalelo kwimeko eklasini: iikona, ezijoliswe ngaphakathi, kufuneka zijikelezwe. Ngenxa yale njongo, izityalo ngokulenga amahlumela, njenge-ivy, zifanelekile. Ukubeka ingozi kunokuba kunye nezinto ezihlobisa - ngokutshala ngaphaya komdlalo wokudlala okanye udwebe intyatyambo enhle. Xa ama-angles apheka, uya kuvakalelwa ngokukhawuleza ukuba umoya usegumbini litshintshile kwaye kwaba lula ukuphefumula.
Amagumbi atyathelwe kumgca owodwa okanye i-corridor kunye neengcango kwelinye umgca lenza umphumo wombhobho: umoya wenguqu, uphuma ngokukhawuleza, akanalo ixesha lokuhambisa umlambo omtsha ebomini babaqeshi. Kodwa akuyimfuneko ukusika iingcango ezintsha kunye namanqaku omdala. Ukunciphisa i-chi ehambayo, faka izinto ezijikeleziweyo ngasendleleni yomlambo, okuza ku funeka ujikeleze, ujikeleze ngeenxa zonke: i-vapor ephezulu, itafile ejikelezileyo, ibhasikiti elihle eligcwele amajikijolo kunye neziqhamo.
Kwizindlu zefestile, iifayile zivaliwe ngokuvaliweyo. Nangona kunjalo, ukukhusela ekukhanyeni kwelanga, kuthintela ukungena kwamandla endlwini, kwaye iziphelo ezibukhali zeiplastiki ezijoliswe ngaphakathi zingaphazamisa ukuhamba kwamandla kummandla. Zama ukuxhoma ifestile ngokuqinileyo. Ukuba ukhanyisa ukukhanya kwamehlo akho, sebenzisa i-tulles okanye i-houseplants efakwe kwifestile ukuze uyikhusele. Ukuba ilanga lilanga, vala ilanga ngeglasi, usebenzise umfanekiso omhle, ozolile kwiglasi.
Izinto ezingadingekile - emnyango
Uninzi ngokuqhelekileyo ukulahla imichimo emidala, ukutya akunakugcinwa, kuba amandla anamathela kwizinto ezindala. Ukutshintsha imikhwa, kunele ukulahla udoti. Kodwa uyazi njani ukuba ufuna into? Kulula kakhulu: ukuba kwakungekho mfuneko kuwe iminyaka emibini, ngoko kunokwenzeka ukuba akuyi kuba luncedo kamva. Emva kokuba uzikhulule kwi-junk, uya kuziva uvuyo, olwenza amandla kwiinguqu zokukhawuleza. Yenza okufanayo kunye neentyantyambo ezomileyo nezipho ezikucaphukisayo: ziyamkela amandla njengamahloni. Zive ukhululekile ukuziphosa, zizungeze ngezinto ezidibanisa kakuhle.
Ukuphucula impilo yakho
Ngokwesiko, impuma yindawo yezempilo. Kwindonga, ekhanyisa ilanga ilanga, kuyimfuneko ukubeka izityalo kunye nezinto ezifuzisela ukuhamba: imithombo, i-aquariums, iimishini zokunyakaza eziphakade. Kwaye ke, faka imifanekiso yezithixo, oza kuthiwa inhlanhla. Ngokomzekelo, isitatimende sase Lakshmi, unkulunkulukazi wenzuzo, onoxanduva lobungangamsha, ububele kunye nekhontrakthi efunwa yi-pyschaks kakhulu. Kwaye abo banemingcipheko engaphephekanga endleleni yabo yokuvisisana badinga imifanekiso kaGanashi-isigama-isigama-indoda: uyasusa nayiphi na imiqobo kwaye inceda ukuphumelela.
Ukuba ikhaya lifana nezinto zonke kwindawo yalo, kunye nemvakalelo yezizathu ezithile kwi-zero, ndifuna ukutya into ephezulu yeekhalori. UFeng Shui unikeza indlela elula yokukhupha umnqweno oyingozi kunye nokuphazamisa iingcamango ezibuhlungu. Hlanganisa i-crystal kwifreyimu yefestile uze uyibulele ihlabathi ngoku. Uya kujongela iliso, ncedise ugxininiso kwiingcamango ezintle, kunye nemisebe yelanga, ephazamiseke ngokukhawuleza, ibe ngumbane wokukhanya. Khawukhumbule ukuqwalasela ubungakanani: ubukhulu bekristal kufuneka bufanise ubungakanani begumbi kunye nefestile - ukuba igumbi likhulu ngokwaneleyo, ngoko i-crystal kufuneka ibe mkhulu. Ungayifaka indawo yeglasi enebala elinemibala ejikeleziweyo.
Kwizindlu apho zihlala ziphantsi kweemithi, i-mezzanines. Ngaphantsi kwabo akunakwenzeka ukuba ube nebhedi kunye neetafile zokutya: banqanda amandla, okukhokelela kwizifo kunye neziganeko ezinzima. Ngokuqhelekileyo akunakunceda ukususa izinto ezinjalo-ngaphandle kokuba i-boram ivaliwe ngesilingi esinqunyanyisiweyo, kodwa kuya kunciphisa ngokucacileyo isikhala. Ukuziguqula izicwangciso, banokuyifaka kwibala elikhanyayo okanye basebenzise ukukhanya okubonakalayo. Okanye ubeke phantsi kwesohlwayo okanye isitshixo se-mezzanine ngamaqabunga ajikeleziwe kunye nesithsaba esikhulu, umzekelo ibhonsai. E-China, iiplanga zikwacetyiswa ukuba zixhamle umqubhiso we-bamboo kwibhoni ebomvu.
Susa ikhitshi kwisebe yombono
Ngendlela, eseChina yakudala wayesazi ukuba kutheni abanye abantu batyelelwe ukutya. Ingxaki yindawo engafanelekanga yekhitshi. Ukuba umntu ongena endlwini ngokukhawuleza ubona itafile yokutya, isitofu okanye izitsha zasekhishini, uya kuqala ukucinga ngokutya. Ukuze ugweme oku, ungalibali ukumboza umnyango okhokelela ekhitshini okanye kwigumbi lokudlela. Nangona kunjalo, ukwahlula akumele kube yomelele, ngaphandle koko kuya kuphula uxolo lwe-qi. Kungcono ukhethe umnyango kunye nokufaka kwiilazi engcolileyo okanye kwiifestile ezikhanyayo.
Izandi zoxolo noxolo
Ngomzuzwana obunzima, ukuzola ukukhathazeka nokulahlekelwa isisindo, izandi ezivakalayo ezivakalayo ziyavakala. Ku-feng shui, kule njongo, sebenzisa "i-eolovu harp" - amathandathu amathandathu ensimbi ahlukeneyo ahlukeneyo, anqunywe kwi-disk ensimbi okanye ensimbi. Xa umoya uphupha, iibhubhu, ezidibeneyo, zivelisa ukukhanya okukhanyayo. Caress isandi kunye nezandi zamanzi ezihamba emithonjeni.
Phantse yonke indlu inekona, elisekude nefestile, apho imisebe yelanga ingafiki khona. Kwimandla ayigxina kwaye ayinakonakaliswa kwiindawo ezinjalo, kufuneka ubenze ngokucacileyo. Beka apha isibane esilungileyo, jongani isibane sokubhabisa, faka isityalo, amaqabunga awo aqondiswe phezulu, umzekelo "ulwimi lwenkobe". Qinisekisa ukuba amaqabunga akhe abukhali ayengeniswa kwigumbi. Ukuba kuyinto emnyama kakhulu kwisityalo, ithathe indawo yeentyantyambo eziphilayo kunye nezinto ezibonakalayo, kodwa zikhangele ngathi zinjalo.
Mirror - kwigumbi lokudlela
UFeng Shui ukulahleka kwesisindo kaninzi ukubonisa ukusebenzisa izibuko ngaphakathi. Enye yezona ndawo zibalaseleyo yile khitshi. Isibuko kufuneka siphonyiwe ukuze sibonakalise itafile ngokutya. Eli lungiselelo livunyiwe ngabafundi beengqondo: kukhangeleka ukuba ukhangela kwisibuko, umfazi uya kudla ngaphantsi, njengoko kuya kuba "ozele ngohlobo", ngaphandle koko, ukucinga akuyi kukuvumela ukuba ulibale ngokuvumelana okufunayo.
I-Aromatherapy ukunciphisa umzimba ngo-feng shui idlala ekudaleni isimo sengqondo esilungileyo ayilona nto ibaluleke ngaphezu kokuhlobisa kwamagumbi. Zama kwinqanaba apho usebenza khona kwimidlalo, ukukhanyisa isibane sesinxeba kunye namafutha abaluleke kakhulu (i-orange, lemon, i-rosemary, i-eucalyptus, umjunipha). Ezi zivumba ziyakukulwa ekulwa neekhilogram, ziphakamise kwaye zithande ukutya kwakho. Ukongezelela, izipho ezikhethiweyo ezichanekileyo ziya kunceda ukuhlangabezana nale ngxaki efana ne-cellulite. Indawo yezemidlalo kufuneka ifakwe kwisikrini. Kuyinto enqwenelekayo ukuba imibala ephezulu ngaphakathi iluhlaza okwesibhakabhaka (ithobisa ithemba kunye nokuqinisa ukuzimisela), i-orange (inceda ekubonakaliseni amathuba afihliweyo, ikhulula kwimoyiko nokudakumba) okanye i-blue (ikhuthaza kwaye iququzelele ukuzaliseka kweminqweno).
Ukuba uqala ukuzama ukulandela imithetho ye-Feng Shui ukuze ulahlekelwe isisindo, musa ukulungiselela iimvume zehlabathi. Shintsha into enye (umzekelo, lungisa kwakhona ikhabhinethi okanye uphinde ulungise udonga kumbala ohlukileyo) kwaye uqaphele iveki okanye ezimbini ukuba zithintela njani ubomi bakho, ingaba kukho amandla amaninzi kunye novuyo, ukuba uxinzelelo kunye nobunzima obuninzi bude. Ukuba ubomi buguquka ngokubhetele kwaye akukho nto engalunganga eyenzekayo, unokuqhubeka nokulungisa utshintsho lwangaphakathi. Ukuba, emva kokutshintsha, uvakalelo lwentlungu, ukuxinezeleka kubonakala, buyisela yonke into.
Indlela yokuqinisa impilo yowesifazane emva kweminyaka engama-45
Umphumo wokushisa, isifo senhliziyo
Izindlela zokwenza i-detoxification kunye ne-excretion ye-carcinogens emzimbeni
Imisebe yelanga kwiindawo eziphelileyo
Iimeko ezihlazo emsebenzini
Indlela yokugcina ulwalamano ukuba indoda nomfazi basebenza kunye?
Njani ukunqoba ukuhlaselwa?
I-egg ekudleni inyama
Kuthekani ukuba kunzima ukuhlula nomyeni wakho?
Iindlela zokunakekelwa kwesikhumba: njani ukhetha?
I-Fortune Teller esuka kwiPhepha ngeZandla Zakho
Ii-Muffins ezine-nutmeg ne-sinamon
I-oat porridge emanzini
I-Pea isobho kunye nenyama